Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Tsara kokoa ny trano fandraisam-bahiny sinoa noho ny eran'izao tontolo izao
Coronavirus ny areti-mandringana dia nanimba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny manerantany, fa ny hafainganan'ny famerenana trano fandraisam-bahiny taorian'ny COVID-19 dia toa miankina amin'ny toerana misy azy.
Ny data avy amin'ny orinasan'ny fikarohana hotely STR dia naneho fa, hatramin'ny aprily ka hatramin'ny novambra, ny zava-bitan'ny hotely sinoa dia nihatsara lavitra noho ny eran'izao tontolo izao.
Ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny isan-kerinandro ao Shina dia 61.7% hatramin'ny faran'ny volana novambra, narahin'ny Moyen Orient (51%), Etazonia (35.7%) ary Amerika afovoany sy atsimo (32.3%).
Ny fivezivezena trano fandraisam-bahin'i Shina dia niaina fisondrotana ambany tamin'ny volana jolay, septambra ary oktobra, saingy tamin'ny ankapobeny dia nitombo izany hatramin'ny volana feb.
Ny lamina fampisehoana dia niovaova be kokoa nanerana ny hemisphere atsimo. Amerika afovoany sy atsimo dia mbola tsy niverina, raha i Afrika sy i Oceania kosa dia miraikitra amin'ny faran'ny lembalemba.
Ho an'ny ankamaroan'ny faritra Azia Pasifika, ny tantaran'ny fanarenana dia miankina amin'ny habetsaky ny tinady ao an-trano afaka mitondra fiara. Ireo firenena miankina amin'ny mpizahatany toa an'i Kambodza sy i Laos dia sahirana mba hipetraka amin'ny tany. Ny fibodoana tamin'ny volana oktobra dia tsy nahatratra 20% tamin'ny tsena roa.